Norway Oo Soomaaliya Ku Caawineysa Deyn Dhan $353 Milyan.
War saxaafadeed rasmi ah ah oo maanta kasoo baxay wasaarada arrimaha dibadda dowlada Norway, ayaa lagu sheegay in Norway ay Soomaaliya siin doonto deyn gaareyso 3,1 bilyan oo lacagta Norwey ah, una dhiganta 353 milyan oo Doolar.
Norway ayaa sheegtay in deyntan ay ku caawineyso Soomaaliya, si ay isaga bixiso deynta looga leeyahay sanduuqa horumarinta Bankiga Aduunka ee loo yaqaan IDA. Taas oo Soomaaliya u sahli doonto in dib loogu furo Akoonkii(xisaabtii) ay ku laheyd sanduuqa horumarinta bankiga aduunka, looguna ogolaado soo qaadashada deyn cusub oo maalgalin la xiriirta.
Wasiirka Deeqaha Norway Dag-Inge Ulstein ayaa dhanka kale sheegay in Norway ay Soomaaliya ka cafin doonto 16 milyan $ oo ay horey ugu laheyd, marka bilowga sanadka danbe la isugu imaado kulanta ka dhici doono magaalada Paris.
Norway ayaa kamid ah wadamada Soomaaliya siiya deeqaha ugu badan, waxeyna Norway sanadkii lasoo dhaafay ugu deeqday 62 milyan oo dollar.